Hot သတ္တု Springs ၏ကုစားခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများ
ပူပြင်းတဲ့ဓာတ်သတ္တုစမ်း၏, လျှော့ပေါ့ rejevenating နှင့်ငြိမ်းစေလျက်အင်အားကြီး
သောတူညီသောလမ်းအတွက် Qi အပ်စိုက်ကုထုံးတလျှောက်တွင်အချို့သောနေရာများမှာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာစုရုံးခြင်းနှင့်ရေကန် ဒီဂရီမျဉ်း - အရပ်တို့ကိုကျနော်တို့ပြီးနောက် "မခေါ် အပ်စိုက်ကုထုံး အချက်များ" - ဒါကြောင့်ငြိမ်းစေလျက်ရေကိုမြေကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်, စုရုံးခြင်းနှင့်ကောက်ခံမှုရန်၎င်း၏လမ်းစေသည်ဖြစ်ပါသည် ရေပူစမ်းသို့မဟုတ်ဓာတ်သတ္တုဗတ်အဖြစ်လူသိများသောနေရာများမှာ။
ပူပြင်းတဲ့နွေဦးရာသီ၌စိမ်အကြောင်းပြချက်များစွာအဘို့, အံ့သြစရာကုထုံးနိုင်ပါတယ်။ အပူနှင့်နောက်ဆက်တွဲချွေးအပေါ်တစ်ဦးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသန့်စင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားအရေ နှင့်ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ထဲစနစ်။
နွေဦး၏တိကျသောဓာတ်သတ္တုအကြောင်းအရာက၎င်း၏ထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ နွေဦးဟာအတော်လေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဖြစ်လျှင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုကျနော်တို့အပေါင်းတို့၏ (ဘဝ-force စွမ်းအင်) ကို Qi လက်ခံရရှိပါတယ်များမှာ ငါးဒြပ်စင် : မြေကြီးတပြင် (နွေဦးကငျြးပခဲ့သောမြေပြင်); သတ္တု (နွေဦးရေအတွက်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုဓာတ်); ရေကို (ရေသူ့ဟာသူ); သစ်သား (ပတျဝနျးကငျြသစ်ပင်များနှင့် / သို့မဟုတ်နွေဦးပတျဝနျးကငျြသစ်သားခုံတန်းရှည်စတာတွေ); မီး (ထိုရေထု၏အပူ, နေ overhead) ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ရေပူစမ်းအတော်လေးသဘာဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်ကိုက်ညီရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။
ပူပြင်းတဲ့နွေဦးရာသီ၌စိမ်များ၏ခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှုဒါမလိုအပ်သောဖိစီးမှုနှင့်တင်းမာမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Qi ၏အားလုံးမှတဆင့်ပိုပြီးချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းခွင့်ဖျက်သိမ်းခံရနိုင်သည်, အပန်းဖြေတဦးတည်းဖြစ်လေ့ ဒီဂရီမျဉ်း ။ Qi အဆိုပါဒီဂရီမျဉ်းတဆင့်ချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းသည့်အခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအပေါငျးတို့သအကြိုးခံစားနှင့်စတင်နေကြသည် ပြုံး ။ ငါသေချာဘို့မသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကအမည်ရှိနှင့်အမည်မဖော်သောငါ၏ hunch င် Taoist နေိုငျ စုပေါင်းမြင့်သောတောင်ပေါ်နှင့်ချိုမြိန်ချိုင့်ဝှမ်းရေပူစမ်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အလှအပခံစားမရေမတွက်နာရီလောက်အချိန်ပေးပြီးရှိသည်။
အမြဲကြောင့်မသိဖြစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောခွအေနမြေားကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ချိုးယူပြီးရှေ့၌၎င်း, ဘယ်လောက်ရေ (သို့မဟုတ်အတွက်နွေဦးရာသီ၌ဆက်နေရန်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်အသိဉာဏ် Be isotonic အဖျော်ယမကာ သောက်ရန်) ။
တချို့ကရေပူစမ်း access ကိုမှသူတို့ကိုအလွန်လွယ်ကူစေသည်တစ်လမ်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးခံပြီ အခြားသူများကိုအတော်လေး uncharted သောတောင်ပေါ်ပိုင်နက်သို့စိတ်အားသန်သောတိုးမြှင့်ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပေမည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်နှစျသိမျ့သင့်ကိုယ်ပိုင်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ aligns တကိုရွေးချယ်ပါ။
ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံစားင့်သောရေပူစမ်းများထဲတွင်, ငါ့အကြိုက်ဆုံး Crestone, ကော်လိုရာဒိုအတွက်သေးငယ်တဲ့ရေတံခွန်များတစ်စီးရီးနေရခြင်းဟာလုံးဝဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသေးသောတဦးတည်း, ပါဝင်သည်။ အလားတူပင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသေးသောတက် Jemez Springs, နယူးမက္ကစီကိုမှတဆင့်အဓိကလမ်းမကြီးကနေတစ်သစ်တောထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ပေမယ့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ - - အတော်လေးပီပီတောင် spa ၏ဆက်စပ်အတွက်တီထွင်ရုံအနောက်ဘက် Santa Fe ၏, ထို Sangre က de Christos တောင်ပေါ်မှာအလတ်စား - တသောင်းလှိုင်းတံပိုးတို့သည်မှာစမ်းဖြစ်ကြသည်။
အရှင်ဝေးအကြှနျုပျ၏ All-အချိန်အကြိုက်ဆုံး, မြောက်ပိုင်းနယူးမက္ကစီကို Ojo Caliente ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစမ်းအနေနဲ့အတိုင်းအတာအထိတီထွင်ခဲ့ကြသော်လည်း, သူတို့သည်နေဆဲသူတို့ကိုအလွန်သဘာဝအလျောက်ခံစားရှိသည် ဖြစ်. , သူတို့ကို birthing ပြည်မှစွမ်းအင်သူတော်ကောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သို့ကမ္ဘာ့ရေပူစမ်းသူတို့ကိုတပါးအမျိုးသားတို့တွင်ထူးခြားသောစေသည်များနှင့်အထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်၎င်းတို့၏အမျိုးမျိုးသောစမ်းအတွက်ဓာတ်သတ္တုရေးစပ်သီ (လီသီယမ်, သံ, ဆိုဒါများနှင့်အာဆင်းနစ်) ၏အမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
သင်အကြိုက်ဆုံးရေပူစမ်းဘာတွေလဲ? ရဲ့ကဤအစွမ်းထက်သောနေရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုဝေမျှကြစို့ - ကျွန်တော်တို့ကိုဤမျှ ပို. ပို. ၎င်းတို့၏သည်အနာပျောက်စေသောစွမ်းအင်မှအကျိုးခြင်းငှါ,!
တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာများ၏ Gelug ကျောင်း
12 estados Que permiten sacar la licencia က de manejar တစ် indocumentados
D-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ X ကို Timeline ကို
ဘယ်လိုကောငျးကငျတ Metatron Kabbalah အတွက် Kether (ထိုသရဖူ) ကိုကိုယ်စားပြုသလဲ
အကောင်းဆုံး '' တောင်ပိုင်း Park က '' ဇာတ်လမ်းတွဲများ 10
အမြင့်ကြိမ်နှုန်းစကားများနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသိအမှတ်ပြုဘို့ Flash ကိုကဒ်များ: အဆင့်အားဖြင့်အဆင့်
Bats အကြောင်း 10 စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်
ခရစ္စမတ် Play and အားလပ်ရက်အနှစ်သက်ဆုံး
(Finish ကိုမှ) ပြင်သစ်ကြိယာ '' Finir '' Conjugate လုပ်နည်း
Optional Sunnah ဆုတောငျးခကျြ
ကို 'Amazing Ball ကိုမိန်းကလေး Catch' 'ညျ YouTube Video Hoax မှာတစ်ဦးကမျှော်
တစ်ဝါကျ၏အကြောင်းအရာ Find လုပ်နည်း